Guddoomiyaha degmada Buur-hakaba oo la xiray.
Muqdisho: qarax shalay subax lala beegsaday ciidamada Ethiopian-ka oo ka dhacay uuqa Xoolaha.
Dad rayid ah ayaa saakay (Arbacadii) ku dhaawacmay weeraro bambaano oo ka dhacay xaafada Suuqa Xoolaha ee magaalada Muqdisho.
Qaraxyadaan ayaa lala beegsaday ciidamada Ethiopian-kaDowlada KMG ee Somalia oo marayay xaafada Suuqa Xoolaha.
Dadweynaha deegaanka ayaa qadka telefoonka saakay iigu xaqiijiyay in qaraxaan kadib ciidamada Ethiopian-ka ay fureen rasaas aan loo meel dayin taasoo qasaaro ay kasoo gaartay dad shacab ah.
Maxamed Cali Cabdi oo kamid ah dadka deegaanka Suuqa Xoolaha ayaa ii sheegay in ciidamadaan ay wateen Taangiyo isla markaana ay ka yimaadeen xerada Maslax una socdeen warshada Baastada oo fariisin adag ay ku leeyihiin.
Maxamed waxa uu sidoo kale sheegay inay arkeen askar kamid ah ciidamada Itoobiyaanka oo qasaaro kasoo gaaray weerarkaasi lagu qaaday oo la xaqiijiyay in bambo gacmeed loo adeegsaday.
Qaraxa kadib ayay ciidamada Ethiopian-ka bilaabeen inay xir xiraan dadkii u dhawaa agagaarka uu qaraxa ka dhacay, iyadoo la sheegay in dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi oo shan qof lagu qiyaasay la geeyay isbitaalka Madiina si loogu daaweeyo.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamada Ethiopian-ka weerar loogu geysto xaafada Suuqa Xoolaha ee magaalada Muqdisho, iyadoo degmada Heliwaa ay noqotay goobta ugu kowaad ee weerarada looga beegsado ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa DF.
Sarkaal ka tirsan ciidamada DF oo Muqdisho lagu dilay.
Sarkaal ka tiirsnaa ciidamada Dowlada Federaalka Somalia ayaa Arbacadii kooxo hubeysan ay ku dileen xaafada Fagax ee magaalada Muqdisho.
Xasan Bisri oo kamid ah Saxafiyiinta madaxa banaan ee Muqdisho ku dhaqan isla markaana degan xaafada Fagax ee degmada Yaaqshiid ayaa qadka telefoonka iigu xaqiijiyay in sarkaalkaan ay dileen rag ku hubeysnaa bastoolada oo madaxa iyo wadnaha kala dhacay rasaas xoogan.
�Marka la dilayay sarkaalkaan inta badan dadweynaha deegaanka wey jiifeen, waxeyna aheyd xili hore, waxaana lagu ag dilay agagaarka daarta Colaad ee ku taal isgooyska Fagax� ayuu yiri Xasan Bisri.
Xasan waxa uu sheegay in dhaawac uu ahaa sarkaalka balse markii la doonayay in isbitaalka loo qaado ay ka baxday nafta, haatana la dhigay gurigiisa si loo asturo kadibna loo duugo.
Afhayeenka booliska gobalka Banaadir C/waaxid oo aan la xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu ka warbixiyo sarkaalkaasi ciidamada ka tirsanaa ee saakay la dilay, isagoo sheegay inay baarayaan sababaha dilka ka dambeeyay.
Si kastaba ha ahaatee ugaarsiga lagu hayo saraakiisha ciidamada dowlada ayaa maalmihii ugu dambeeyay kusoo badanayay caasimada Somalia ee Muqdisho, iyadoo bil gudaheed la dilay tiro 3 sarkaal gaaraysa.
Guriga Guddoomiyaha Wadajir oo la weeraray.
Aug 22: Kooxo hubeysan ayaa xalay weerar abaabulnaa kusoo qaaday guriga Guddoomiya degmada Wadajir Axmed Xasan Cadow �Daaci� xili uu ku sugnaaa gurigiisa.
Guddoomiyaha ayaa saakay Saxaafada u xaqiijiyay in qasaaro lixaad leh uu gurigiisa kasoo gaaray weerarkaasi, isagoo sheegay in dhowr bambaano ay kusoo dhaceen gudaha gurigiisa.
Guddoomiye Daaci waxa uu xusay in ciidamadiisa ay dagaal xoogan la galeen kooxda weerarka soo qaaday, isagoo sheegay hadii aysan ciidamadiisa aheyn in xalay la doonayay in la dilo.
Waxa uu sheegay in ciidamada isaga ilaaliya ay gacanta ku soo dhigeen dad la tuhmayo oo uu ka mid yahay nin wade ka ahaa baabuur xilligaasi agmarayay Guriga Gudoomiyaha iyo Ninkale oo la socday.
Waxa uu intaas raaciyay in weli ay ciidamadu wadaan baaritaano ay ugu jiraan kooxo kale oo la tuhmayo in weerarkaas in ay lug ku yeelan karaan.
�waxaan ugu baaqayaa kooxaha weerarada ama ugaarsiga ku haya Guddoomiyaasha degmooyinka gobalka Banaadir inay ka toobad keenaan isla markaana ay ogaadaan hadii ay qof dilaan inaysan gaari doonin guusha ay ku tuhmayaan loona baahan yahay wada hadal mar kasta� ayuu yiri Daaci.
K/xigeenka duqa magaalada Muqdisho ee dhinaca ammaanka Cabdifitaax Ibraahim Shaaweey ayaa Saxaafada u sheegay inay ka xun yihiin weerarkaasi isla markaana ay baaritaano xoogan ciidamada wadaan hada lana ogaan doono saacadaha soo socda cida sida rasmiga ah ugu dambeysay weerarkaasi, isagoo ku goodiyay inay talaabo aan horey loo arag ku qaadi doonaan cidii lagu helaa falkaasi.
Si kastaba, waa markii ugu horeysay oo guriga Axmed Daaci weerar noocaan oo kale lagu qaado, tan iyo markii xilkaas loo magacaabay, iyadoo horey weerar loogu dilay Guddoomiyaal iyo K/xigeenadooda.
EU oo cambaareysay dilalkii oo geystay Howl-wadeenadii HornAfrik.
Warbixin ay soo saareen ururka Midowga Yurub aay si xoogan ugu cambaareeyeen dilalkii dhawaan Muqdisho loogu geystay Agaasimada Idaacada HornAfrik Cali Iimaan Sharmaarke iyo Wariye Mahad Axmed Cilmi.
Ururka waxuu sheegay inay aad ugu xun yihiin dilalkaasi mas�uuliyiinta warbaahineed loo geystay, waxuuna ku booriyay Dowlada Federaalka inay sameysay baaritaano lagu ogaanayo cidii sida rasmiga ah ugu dambeysay dilalkaasi.
�Dowlada KMG ah ee Somalia waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdaa baaritaano eex la�aan ah oo ay ku ogaaneyso cida sida rasmiga ah ugu dambeyso arintaan si sharciga loo horkeeno� ayaa lagu yiri warbixinta.
Warbixintaan oo ay ku saxiixdeen dowlada Portugal oo iminka heysta madaxtinimada ururka Midowga Yurub ayaa sidoo kale lagu sheegay in dilalkaan loo geystay labada saxafi ay hoosta ka xariiqeyso baahida deg deg ah ee dhinaca ammaanka ah oo loogu baahan yahay Somalia xiligaan.
EU ayaa sidoo kale dib ugu celiyay taageerada uu u hayo dadaalada Dowladda Somalia ay sare ugu qaadeyso xoriyadda hadalka iyo halganka warbaahin aan dhinac u jan jeerin oo akhbaar sax ah ku dhisan.
11-kii bishaan ayaa allaha u naxariistee Weriye Mahad Axmed Celmi oo ahaa Madaxii Idaacadda Capital Voice, ayaa lagu toogtay meel dibedda ka ah xarunta Warbaahinta Horn Afrik iyadoo saacado kadib agaasimihii Horn Afrik Cali Iimaan Sharmaarke waxa uu geeriyooday markii gaarigii uu saarnaa uu qarax la kacay, isaga oo kasoo laabtay aaskii Mahad.
Ciidamada Dowlada KMG ah ee Somalia ayaa xabsiga dhigay Guddoomiyaha degmada Buur-hakaba ee gobalka Bay Maxamed Cabdi Xuseen Owqaareey.
Qaar kamid ah xubnaha maamulka degmada Buur-hakaba ayaa saakay Saxaafada u xaqiijiyeen in qaar ka tirsan booliska DF ay saakay xafiiskiisa ka wateen Gudoomiyaha Buur-hakaba Owqaareey, isla markaana aan la ogeyn ilaa xiligaan sababaha guddoomiyaha loo xiray.
Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in Guddoomiyaha maalmihii ugu dambeeyay uu waday abaabulo uu kaga soo horjeedo siyaasada ay ku dhaqmeyso Dowlada Federaalka, iyadoo warar kalena ay sheegayaan in xariga Guddoomiyaha ay ka dambeyso kadib markii uu gabaad siiyay rag ka tirsanaa Maxkamadihii Islaamiga ee degmadaasi.
Odoyaasha degmadaasi ayaa wada dagaalo ku aadan sidii xabsiga loogu soo deyn lahaa guddoomiyaha, iyadoo saraakiisha booliska dowladana ay sheegeen inaysan iyaga deyn karin guddoomiyaha oo amar ka sareeya uu xabsiga dhigay.
Si kastaba, waa markii ugu horeysay oo xabsi la dhigo Guddoomiyaha Buur-hakaba ee gobalka Bay Maxamed Cabdi Xuseen Owqaareey.